Ku soo dhowow Öst Nori Advokatbyrå AB
Öst Nori Advokatbyrå AB waa shirkad sharciyeed oo bani'aadam ah oo ku takhasusay sharciga magan galyada iyo socdaalka,
sharciga qoyska iyo arrimaha dembiyada iyo sidoo kale xuquuqda caafimaadka iyo xuquuqda daryeelka caafimaadka. Xafiisku wuxuu ku yaalaa Solna Centrum.
Fadlan nala soo xiriir si aad u wacdid TELEFONKA TELEFOONKA!
ASYL IYO MIGRATION XUQUUQDA
Waxaan kaa caawineynaa kuwa lagugu qasbay inaad ka soo duulisid wadankaagii hooyo oo aad guri ka raadsatid Iswiidhan.
Waxaan kaa caawineynaa arrimaha quseeya arrimaha qoyska.
Waxaan qabanaa waajibaadka labadaba sida qareenka dacwad-oogaha iyo difaacayaasha guud iyo kan gaarka ahba.
Waxaan sidoo kale kaa caawineynaa xuquuqda caafimaadka iyo xuquuqda daryeelka caafimaadka.
Öst Nori Advokatbyrå AB wuxuu kaa caawinayaa kuwa lagugu qasbay inaad ka soo duulisid wadankaagii hooyo, aadna magangalyo ugu raadsatid Iswiidhan, magangelyo. Waxaan sidoo kale kaa caawin karnaa sidii aad u codsaneyso ogolaanshiyaha joogitaanka sababtoo ah xiriir la leh qof Iswiidhan ah ama aad codsaneyso muwaadinimada iswiidhishka. Haddii aad rabto inaad codsato ogolaansho shaqo ama ruqsadda degenaansho sababtoo ah daraasaadka Iswiidhan, waxaan kaa caawin karnaa arjiga.
Haddii aad qabto xaaladaha cusub xaq in la joojiyo cayrinta, waxaan kaa caawin kara codsiga fulinta. Öst Nori Advokatbyrå AB waxay kaloo kaa caawineysaa xabsiga.
Xaaladaha magangelyada iyo sharciga socdaalka waxaa laga yaabaa inaad xaq u yeelatid qareen oo si guud loo caawiyo. Ka dib kaaliyahaaga sharciga ayaa bixin doona gobolka. Waxaad xaq u leedahay inaad rabto qofka aad rabto kaalmo dowladeed. Öst Nori Advokatbyrå AB wuxuu kaloo u shaqeeyaa wakiil gaar ah dhammaan noocyada kiisaska la xiriira ogolaanshaha joogitaanka.
East Nori Law shirkad uu leeyahay waayo-aragnimo ballaaran oo dhan sababo deggan iyo sidoo kale arrimaha la xiriira joogitaanka ee dadka waaweyn iyo carruurta ka shaqeeya. Fadlan nala soo xiriir wixii macluumaad dheeraad ah iyo talooyin.
Halka Ost Nori Advokatbyrå AB, waxaa lagaa caawin doonaa arrimaha quseeya arrimaha qoyska.
Tusaale ahaan, marka qoyska la kala diro, su'aalaha ku saabsan hoyga carruurta, galmada iyo xannaaneynta ayaa laga yaabaa inay soo baxaan. Caadi ahaan, arrimaha dhaqaalaha sida cidda ku sii jiri doonta guryaha iyo fulinta amaahda guryaha waa caadi. Haddii ay dhacdo in is-khilaafaan su'aalahan waxaa xalin kara maxkamad.
Waxaan sidoo kale kaa caawinnaa wada-noolaanshaha wada-noolaanshaha iyo guurka ee wada-noolaanshaha / guurka, sida shahaadooyinka hadiyadaha iyo axsaabta. Fadlan kala xidhiidh Öst Nori Advokatbyrå wixii macluumaad dheeraad ah iyo talooyin.
Öst Nori Advokatbyrå waxay udub dhexaad u tahay dacwad dhageysiga labadaba sida qareenka dacwad-oogaha iyo difaacayaasha dadweynaha iyo kuwa gaarka loo leeyahay. Waxa kale oo aanu helnaa shaqooyin ah wakiil gaar ah carruurta. Haddii lagugu helo dembi ama laga shakisan yahay dembi waxaad xaq u leedahay inaad codsato qareen. Fadlan kala xidhiidh Öst Nori Advokatbyrå wixii macluumaad dheeraad ah iyo talooyin.
in Öst Nori Advokatbyrå AB Hel caawinaad garyaqaan leh khibrad weyn, aqoon faahfaahsan iyo ballanqaad adag. Danta danta macaamiisha ayaa laga helaa si kasta oo waxaanu ku jirnaa dhinacyadaada inta lagu jiro nidaamka sharciga.
- Qareen, milkiilaha -
Luuqadda: Swedish, English
- Ku xigeenka garyaqaanka -
Luqadaha: Swedish, English, Albanian
SHAQADA & MACLUUMAADKA
Öst Nori Advokatbyrå AB si joogto ah u aqbalaan codsiyada shaqada ee hay'adda. Adiga oo u gudbay shahaadada sharciyada oo aad u haysatid xiisaha gubashada ee xuquuqda aadanaha guud, iyo sidoo kale socdaalka iyo xuquuqda aadanaha, gaar ahaan sharciga qoyska iyo arrimaha dembiyada, ayaa lagu soo dhaweynayaa inaad u dirto codsigaaga hay'adda. Ma tahay inaad gasho qareen ama baarlamaan oo aad doonayso aragti wax ku ool ah oo ku saabsan shaqada qareenka sharciga aadanaha? Waxaan si joogto ah u aqbalnaa codsiyada tababarka ee hay'adda. Waxaa lagugu soo dhaweynayaa inaad u soo dirto codsigaaga shaqo / tababar shaqo oo leh warqad shakhsiga ah iyo CV adigoo email u diraya: linn@ostnoriadvokatbyra.com
Telefoon, email ama fariin fariin nooga soo dir foomkayaga.